Mgbapụ mgbochi mmanụ a honeyụ maka bọmbụ ụzọ bọs, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ogwe ndị na-ebu mmanụ, China Anti slide honeycomb panel maka bọs ụzọ ụgbọ ala, ụzọ ụgbọ mmiri, ogwe ndị dị n'ụgbọ mmiri Ndị na-emepụta ụgbọ mmiri, Ndị na-ebugharị ya, actorylọ ọrụ - Suzhou Beecore Mmanụ acomụ Mmanụ Co., Ltd
A na-eji mpempe akwụkwọ alumini a checkered n’elu anụ ahụ maka ebumnuche ihe mgbochi, na mmanụ a honeyụ a coreụ n’ime, azụ azụ ahụ dị larịị.
A na-eji ogwe osisi eme ihe maka ala, iji hụ na ikike dị mma, akpụkpọ anụ a tụrụ aro bụ 2.5mm ma ọ bụ 3.0mm, na okpokoro kwesịrị ịbụ ma ọ dịkarịa ala 25mm ma ọ bụ 30mm.
Ọ bụrụ n ’ibu karịrị nha ọkọlọtọ ahụ anụ ahụ dị mkpa ka ejikọta ya site na ugbu a n’ahịa ka nnukwu akpụkpọ anụ checkered aluminom bụ 1220x2440mm, ebe azụ na mmanụ acomụ nwere ike ịbụ mpempe akwụkwọ dum.
Is A na-eji bọọdụ mmanụ a surfaceụ n’elu ala amị amị eme ihe maka ala ndị dị ka ala ụgbọ, ala mmiri na ala dị larịị.
● Jiri okpomọkụ ruo 350c Celsius
● Ọkụ dị elu
Me Ire na-eguzogide
Ọmarịcha mmiri na nguzogide corrosion
Ratio Ngo siri ike
Ezigbo mma ụlọ
Ezigbo njikọ ike
. Corrosion na-eguzogide ọgwụ
BECR Panel kọlụkọ mmanụ Mmanụ a Honeyụ nke Jiangsu Beecore dị na Taizhou nwetara asambodo na Bonding Standard DIN 6701 A2, nzere maka ojiji nke njikọta njikọta nke ugbo ala ụgbọ ala na akụkụ nke ugbo ala ụgbọ ala.
Okpukpo ahihia mpempe alumini 0.5-1mm ma ọ bụ ahaziri
Mpempe akwụkwọ mmanụ a Honeyụ 2-15 mm
Ogwe ogwe 1220mm Max
Ogologo panel 2440mm Max
Agba Ihe okike, White ma obu dika achoro
Elu agha gwụchara Mkpuchi Sị
Igwe eji eme ihe （BHM-EM-A2200）
Aluminium corrugated igwe
Ngwongwo ulo a na-aru aru di uto